ड्राइभरले युवतीलाई काखमा राखेर टिप्पर चलाउँदा दुर्घटना भयो : घाइतेको बयान पुरा पढ्नुहोस् – cafeguff
ड्राइभरले युवतीलाई काखमा राखेर टिप्पर चलाउँदा दुर्घटना भयो : घाइतेको बयान पुरा पढ्नुहोस्
शुक्रबार मुस्ताङमा टिपर दुर्घटना हुँदा २० जना मजदुरले ज्यान गुमाए।कसरी भयो टिपर दुर्घटना? टिपर दुर्घटनाबाट बचेका घाइते रोल्पाका ऋषि घर्तीमगरले घटनाको नालीबेली कान्तिपुर दैनिकलाई यसरी सुनाएका छन्
-हामी काम गर्ने ठाउँमा जहिल्यै टिपर चढेर ओहोरदोहोर गथ्र्यौं। शुक्रबार पनि खाना खाएर काममा जाँदै थियौं। हिँडेर जाँदा ४५ मिनेट लाग्छ । शुक्रबार टिपरमा बालुवा भरी थियो । हामी ३०–३२ जना कामदार थियौं । म दाङको सुरवीर चौधरीको काखमा बसेको थिएँ।
रोल्पा लिवाङको अर्जुन घर्ती र प्रसाद पुनलाई अंगालो हालेर जिस्किँदै थिएँ । हामी त्यसरी नै कहिले ढुंगा, कहिले बालुवामाथि बसेर जान्थ्यौं । कोरला जाने पुरानो बाटोबाट टिपर गुडेको थियो । टिपर न्युट्रलमा थियो जस्तो लाग्छ । एकछिनमा झ्याक–झ्याक गर्दै ओरालोतिर गयो।
ब्रेक नलागेपछि गुल्टियो । पछाडिको ढालामा लक लागेको रहेनछ, ढ्याम–ढ्याम भयो । ढालाले धेरै मान्छे च्याप्यो । अलि तल पुगेर गाडी पर्लङ्गै पल्टियो । त्यसपछि के भयो, मलाई केही थाहा भएन । १५–२० मिनेट बेहोस भएछु । उठेर हेर्दा जताततै लासैलास थियो।
मेरो माइलो भाइ सन्त घर्तीमगर पनि दुर्घटनामा बित्यो । जिस्किँदै, चल्दै आएका तीनै जना बिते । हाम्रै साथीभाइले हामीलाई उद्धार गरे । घेलुङबाट नर्स पनि आए । घटनास्थलमै १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । ड्राइभर लाइसेन्सवाला नै हो । बरु लाइसेन्स नहुने अरू थुप्रै ड्राइभर छन् । हिजै त्यस्तो भयो । भाग्यको खेल होला।
हामी २०५७ सालदेखि मुस्ताङमा बस्थ्यौं । बाटो खन्ने काम गथ्र्यौं । बेनीबाट कोरला जोड्ने बाटोमा ग्याबिन, पर्खाल, पुल, कल्भर्ट बनाउने काम गर्छौं । बिरुवा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने हामीजस्ताको धेरै समूह छ । दुर्घटनामा परेको दुई समूह मात्रै हो।
मेरो पार्टनर रमेशका श्रीमती, दुई साला, जेठान, दिदीसासू, साढुदाइ र भदैलाई पनि यही दुर्घटनाले खायो । मेरो साँप्राको हड्डी भाँचिएको छ । अन्तिमसम्म कम्पनीले उपचार गर्ने हो कि होइन? ठूलो भाग्यबाट बँचियो जस्तो लाग्छ ।
रुपन्देहीको खैरेनी चोकमा सुन गोहोरो फेला, सुरक्षित स्थानमा छाडियो